Guddoomiyihii xilka laga qaaday Taabit iyo guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo kulmay – Radio Daljir
Janaayo 22, 2018 7:11 b 0
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabit Cabdi iyo guddoomiyaha cusub ee bedelaya Enj. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho.
Kulanka oo ay goob joog ka ahaayeen xildhibaano, saraakiil ciidan iyo wasiiro kasoo jeeda gobolka Banaadir ayaa kadhacay hoyga Taabit, waxaana la isku afgartay in la dajiyo xiisadda siyaasadeed ee ka jirta gobolka Banaadir ee u dhaxaysa dowladda iyo Taabit Cabdi.
Kulanka ayaa la isku afgartay in xilka uu wareejiyo guddoomiyihii hore Taabit Cabdi, lagana fogaado wax walba oo dhibaato u horseedaya shacabka ku nool Muqdisho.
Taabit Cabdi ayaa xilkiisa ku waayay dhulal danta guud ah oo uu ku iibiyay magaalada Muqdisho, taasi oo madaxwaynaha Soomaaliya uu kasoo horjeestay.